နိုင်ငံခြားရေခြားမြေခြားက ဘုရားကို အိမ်မက် ထဲမှာ ဖူးမြှော်ခဲ့ရတဲ့ ထူးခြားတဲ့သူမရဲ့အိမ်မက်ကို ဖောက်သည် ချပြောပြလာတဲ့ခင်ရူပ – XB Media & News
နိုင်ငံခြားရေခြားမြေခြားက ဘုရားကို အိမ်မက် ထဲမှာ ဖူးမြှော်ခဲ့ရတဲ့ ထူးခြားတဲ့သူမရဲ့အိမ်မက်ကို ဖောက်သည် ချပြောပြလာတဲ့ခင်ရူပ
January 7, 2022 Bestie_Author Cele News 0
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ ခင်ရူပကတော့မော်ဒယ်လ်လောကမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သူဖြစ်တဲ့အပြင် အလှမယ်တစ်ယောက်အဖြစ်လည်း လူသိများခဲ့တာပါ။ အနုပညာအလုပ်တွေကိုအခုချိန်မှာရပ်နားထားတဲ့ ခင်ရူပကတော့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝနဲ့အေးချမ်းစွာနေထိုင်နေသူပါ။
လက်ရှိမှာတော့ ထူးခြားတဲ့သူမရဲ့အိမ်မက်အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေကို ပြောပြခဲ့တာပါ။”Singapore မှ မိတ် ဆွေများ ရှင်.ထူး ဆန်းတာလည်း အရမ်းပါ..ခုလည်း ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလည်း အကူအညီတောင်းတာပါနော်..လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ရက်လောက်က အိပ်မက် မက်ပါတယ်…သေချာပြောရရင် တချို့ story လိုပါထင်နိုင်လောက်တာမို့မပြောတော့ဘူးနော် 😅 highlight လေးဘဲပြောပါမယ်”
Singapore က လေးမျက်နှာဘုရားရှေ့မှာ ကိုရင်(သို့)ဘုန်းကြီး ၂ပါးကို သင်္ကန်းကပ်ပေးရမယ်” လို့ ထင်ထင်ရှားရှားကြီးမိန့်သွားတာပါ .. ပုဂ္ဂိုလ်တော့ မပြောတော့ပါဘူး..အာ့နဲ့ Sg မှာ လေးမျက်နှာဘုရားရှိမရှိစုံစမ်းတော့ ရှိတယ်ပေါ့နော်..
ဒါမယ့် ရူပအိပ်မက်ထဲကလို လေးမျက်နှာဘုရားရှေ့မှာ ကပ်လို့ရနိုင်ပါ့မလားဟင်? ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့နီးတဲ့ နေရာလည်း တွေ့ထားပါတယ် .. ဘုန်းဘုန်းတွေကို ပြောပြပေးပြီး အကူအညီတောင်းလို့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားပေါ့နော်… Sg ဆိုတော့ ဘယ်လိုဘယ်ဝါအထာရှိမှန်းရူပလည်း မသိဘူးရယ် 😞
ပြည်တွင်းမှာသာဆိုရူပ ပြေးသွားပြီး အကူအညီတောင်းမိမှာပေါ့နော်.. အရင်အခြေအနေသာဆို ကျမ ticket ဖြတ်ပြီး ပြေးသွားလိုက်ပါပြီ 😞 ခုတော်တော် စိတ်ဒုက္ခရောက်တယ် သွားမရသေးတော့..ဘယ်သူများဒီအိမ်မက်ကို လျှောက်ထားပေးပြီး လေးမျက်နှာဘုရားရှေ့မှာကပ်လှူခွင့် ရဖို့ ကူညီပေးနိုင်မလည်းရှင်?
မလွယ်ကူလည်း အားမနာပါနဲ့နော်.. ရူပ က အားနာရမှာပါ…အဲ့လို မျိုးကပ်လို့မရဘူး ဆိုရင်တော့ ခုသိထားတဲ့ လေးမျက်နှာဘု ရား တည်ရှိရာနဲ့ နီးတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဘဲ ကပ်ဖို့ ရူပ ကြိုးစားပါမယ်.. သင်္ကန်းပို့ဆိုလည်းပို့ပေးပါမယ်နော်…
pls help me if you can naw 🙏🏻”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ပြောပြခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတ်ကြီးလည်းရူပရဲ့အိမ်မက် ဆန္ဒလေးလည်း အမြန်ဆုံးပြည့်ဖို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါဦးနော်။
Koe – CeleGabar
CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရ ခင္႐ူပကေတာ့ေမာ္ဒယ္လ္ေလာကမွာေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ သူျဖစ္တဲ့အျပင္ အလွမယ္တစ္ေယာက္အျဖစ္လည္း လူသိမ်ားခဲ့တာပါ။ အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုအခုခ်ိန္မွာရပ္နားထားတဲ့ ခင္႐ူပကေတာ့ အိမ္ေထာင္သည္ဘဝနဲ႔ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ေနသူပါ။
လက္ရွိမွာေတာ့ ထူးျခားတဲ့သူမရဲ႕အိမ္မက္အေၾကာင္းကို ပရိသတ္ေတြကို ေျပာျပခဲ့တာပါ။”Singapore မွ မိတ္ ေဆြမ်ား ရွင္.ထူး ဆန္းတာလည္း အရမ္းပါ..ခုလည္း ဘယ္လိုလုပ္ရင္ေကာင္းမလည္း အကူအညီေတာင္းတာ ပါေ နာ္..လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ရက္ေလာက္က အိပ္မက္ မက္ပါတယ္…ေသခ်ာေျပာရရင္ တခ်ိဳ႕ story လိုပါထင္ႏိုင္ေလာက္တာမို႔ မေျပာေတာ့ဘူးေနာ္ 😅 highlight ေလးဘဲေျပာပါမယ္”
Singapore က ေလးမ်က္ႏွာဘုရားေရွ႕မွာ ကိုရင္(သို႔)ဘုန္းႀကီး ၂ပါးကို သကၤန္းကပ္ေပးရမယ္” လို႔ ထင္ထင္ရွားရွားႀကီးမိန႔္သြားတာပါ .. ပုဂၢိဳလ္ေတာ့ မေျပာေတာ့ပါဘူး..အာ့နဲ႔ Sg မွာ ေလးမ်က္ႏွာဘု ရားရွိမရွိစုံစမ္းေတာ့ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္..
ဒါမယ့္ ႐ူပအိပ္မက္ထဲကလို ေလးမ်က္ႏွာဘုရားေရွ႕မွာ ကပ္လို႔ရႏိုင္ပါ့မလားဟင္? ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနဲ႔နီးတဲ့ ေနရာ လည္း ေတြ႕ထားပါတယ္ .. ဘုန္းဘုန္းေတြကို ေျပာျပေပးၿပီး အကူအညီေတာင္းလို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မ လားေပါ့ေနာ္… Sg ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုဘယ္ဝါအထာရွိမွန္း႐ူပလည္း မသိဘူးရယ္ 😞
ျပည္တြင္းမွာသာဆို႐ူပ ေျပးသြားၿပီး အကူအညီေတာင္းမိမွာေပါ့ေနာ္.. အရင္အေျခအေနသာဆို က်မ ticket ျဖတ္ၿပီး ေျပးသြားလိုက္ပါၿပီ 😞 ခုေတာ္ေတာ္ စိတ္ဒုကၡေရာက္တယ္ သြားမရေသးေတာ့..ဘယ္သူမ်ားဒီအိမ္မက္ကို ေလွ်ာက္ထားေပးၿပီး ေလးမ်က္ႏွာဘုရားေရွ႕မွာကပ္လႉခြင့္ ရဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္မလည္းရွင္?
မလြယ္ကူလည္း အားမနာပါနဲ႔ေနာ္.. ႐ူပ က အားနာရမွာပါ…အဲ့လို မ်ိဳးကပ္လို႔မရဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ခုသိထားတဲ့ ေလးမ် က္ႏွာဘု ရား တည္ရွိရာနဲ႔ နီးတဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာဘဲ ကပ္ဖို႔ ႐ူပ ႀကိဳးစားပါမယ္.. သကၤန္းပို႔ဆိုလည္းပို႔ေပး ပါမယ္ေနာ္…pls help me if you can naw 🙏🏻”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ ေျပာျပခဲ့တာပါ။ CeleGabar ပရိ သတ္ ႀ ကီးလ ည္း႐ူပရဲ႕အိမ္မက္ ဆႏၵေလးလည္း အျမန္ဆုံးျပည့္ဖို႔ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါဦးေနာ္။
ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြီးထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ လူတချို့ရဲ့ ဝေဖန်တဲ့စကားတွေကြောင့် သူများနိုင်ငံမှာ သုညက နေစရမယ့် သူတို့ဘဝအခြေအနေကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဟန်လင်း…
နယ်ကျော်ပြီး ေ-ာလာ’ မ တဲ့ ဟွန်ဆင်ကို သာသာနဲ့ နာနာ အထိနာသွားအောင် ပြောလိုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့် မိုရ်